T A H မှ ပုံ ပြ င် များ: နှစ်ပင်လိမ်
T A H မှ ပုံ ပြ င် များ
က မ္ဘာ ဦး လိ ပ် ပြာ တ စ်ကော င်တော င် ပံ ခ တ် လို က် တဲ့ တ ခ ဏ မှာ T A H ကိုမွေးဖွားခဲ့ တ ယ် ။
လောရှည် - ကတဲ့ပွဲ
Law Shay - Shoot
Law Shay - Lunch
TAH မှ ပုံပြင်များ
၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ကမ္ဘာသူ/သား
ယောက်တိတိ ပိုးတီကောင်တွင်းကို ဖြတ်သန်းကာ လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့ကြပါသည်။
သူ၏ရှေ့တွင် ထိုင်နေသော အထက်၊အောက်အ၀ါရောင် တဆင်တည်း ၀တ်ထားသော မိန်းကလေး၏ မျက်နှာကို တချက် အကဲခပ်လိုက်သည်။ သူမ ခါတိုင်းလို ရွှင်ရွှင်ပျပျ မရှိတာကို သတိထားမိသည်။ သူ ဖွင့်ပြောလိုက်ရတော့မည်လော၊ မပြောသေးပဲ ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းရမည်လော။ စားပွဲပေါ်ရှိ လိမ္မော်ရည်ကို သူ တကျိုက် ယူသောက်လိုက်သည်။ ကိုယ်ကို မတ်နေအောင် ပြင်ထိုင်လိုက်ပြီး
“လွင့်ကို ကိုယ်တစ်ခု ပြောစရာ … ။” “လွင် ကို့ကို ပြောစရာ … ”
ပြောမဲ့ပြောတော့လဲ နှစ်ယောက်စလုံး နှုတ်မှ သံပြိုင်ထွက်လာသည်။
“မဟုတ်ဘူး၊ ကို အရင်ပြော။”
သူဘာပြောမည်ဆိုတာ သူသိသဖြင့် သူဇွတ်ငြင်းမိသည်။
“လွင် အရင်ပြောပါ၊ ကိုယ့်ကိစ္စက နောက်မှ ပြောလဲ ရပါတယ်။”
လွင်ဆိုသော မိန်းကလေးသည် ပင့်သက်တချက် ရှိုက်သွင်းလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်း တချက် စေ့သည်။ အတန်ကြာမှ သက်ပြင်းတချက်ချပြီး လေးလေးတွဲ့တွဲ့ အသံဖြင့် …
“လွင် တို့ လမ်း ခွဲ ရ အောင် ကို … ။”
“ကို့မှာ အပြစ်မရှိပါဘူးကို။ ကို့ကို လွင်ချစ်လို့ မရတော့တာ တခုပါပဲ။ လွင့်မှာ တခြား ချစ်ရမဲ့သူ ရှိနေပြီ … ။”
ကမ္ဘာမြေသည် အိုးထိန်းစက်ကဲ့သို့ ချာချာလည်လေသည်။
“ကောင်းပြီလေ။ လွင့်သဘောပါ … ။”
လေသံကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားထိန်း၍ ပြောလိုက်ရသည်။
“ကို ပြောစရာ ရှိတယ်ဆို၊ ဘာပြောမလို့လဲ ဟင်။”
သူ့ကို ‘ကို’ ဟု ဆက်ခေါ်နေတုန်းပါလား။ အကျင့်ပါနေလို့ ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ ဒီအချိန်ကျမှတော့ သူပြောမည့်စကားကို ပြောနေလို့လဲ မထူးတော့ပါဘူးလေ။ ဘယ်လို ပြန်ပြောရမည် စဉ်းစားနေဆဲတွင်ပင် …
“ကို မပြောတော့ဘူးဆိုရင် လွင်သွားတော့မယ်။ ချိန်းထားတာလေး တစ်ခု ရှိလို့။”
ဟိုတစ်ယောက်နဲ့လားဟုပင် ပြန်မမေးဖြစ်ပါ။ ၁၂၀% သေချာနေသော အဖြေကို သိရ၍ ဘာအကျိုးအမြတ်ရှိပါမည်နည်း။
ကမ္ဘာကြီးသည် အိုးထိန်းစက်ကဲ့သို့ ချာချာလည်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ အဖြစ်အပျက်များက မြန်ဆန်လွန်းသဖြင့် မယုံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ရသည်။ သူ၏ခံစားချက်များသည် နိမ့်လိုက်၊မြင့်လိုက်နှင့် ပန်းပေါင်းစုံ ဖူးပွင့်နေသော လှပသည့် ကမ္ဘာမြေကြီးသည် အိုးထိန်းစက်လို ချာချာလည်၍ သူ့လောကထဲသို့ ၀င်ရောက်လာသလို သူခံစားရသည်။
လမ်းခွဲစကားပြောမည့်သူထက် ဦးအောင်လမ်းခွဲစကား ပြောသွားသဖြင့် အနည်းငယ် မကျေနပ်သလိုလို၊ ခံရခက်သလိုလို ရှိသော်လည်း အခုမှတော့ ဒါတွေက အရေးမကြီးပါဘူးလေဟု သူ့ကိုယ်သူ ဖြေသိမ့်ရသည်။ ကိစ္စတစ်ခု အောင်မြင် ပြီးမြောက်သွားသလို ခံစားရသည်။ ‘မိုး’ ထံသို့အသွားတွင် သူ၏ခြေလှမ်းများက သွက်လက် ပေါ့ပါး နေလေသည်။
မိုး ကို သူ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ အောင်သွယ် ၀န်ဆောင်မှု တစ်ခုတွင် သူ စသိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ မိုးသည် တီတီတာတာ ပြောတတ်သည်၊ စိတ်ရင်းကောင်းသည်၊ ပျော်တတ်သည်၊ ဟာသဥာဏ်ရှိသည်၊ လွယ်လွယ်နှင့် စိတ်မဆိုးတတ်။ အပြင်မှာ မမြင်ဖူးသော်လည်း ကွန်ပျူတာ ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ဖော့စဖိတ်ဓာတ်ပေါင်းမှုန့်များက ဖော်ပြပေးသော သူမ၏ စကားများဖြင့် သူ မိုးကို သံယောဇဉ်တွယ်ပြီး ချစ်မိလေသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် လွင့်အပေါ်တွင် ထားရှိသော သူ၏ အချစ်များ တဖြည်းဖြည်း လွင့်ပါးလာခဲ့ရပြီး ချစ်သူတစ်ယောက်လို မချစ်နိုင်သော အခြေသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရသည်။ လွင်ရိပ်မိသွားလို့များ သူစိတ်ချမ်းသာအောင် လမ်းခွဲပေးခဲ့တာများလား … ။
“တိန် တောင် တိန် တောင် … ”
လက်ကိုင်ဖုန်းသို့ message ၀င်လာသောကြောင့် သူ့အတွေးမျှင်များ ပြတ်တောက်သွားသည်။ မိုးဆီကပဲ။
“မိုးရောက်နေပြီ၊ အ၀ါရောင် ၀တ်ထားတယ်။”
သူလဲ ရောက်လုပါပြီ။ ချိန်းထားသော ကော်ဖီဆိုင်ထဲသို့ သူလှမ်းဝင်လိုက်သည်။ ဆိုင်အတွင်းတွင် အ၀ါရောင် အပေါ်အောက် ဆင်တူ ၀တ်ထားသော မိန်းကလေးကို တစ်ဦးတည်းသာ ရှိသည်။ ကောင်းသည်၊ လူမှားစရာ မရှိတော့။ သူဆိုင်ထဲ လှမ်းအ၀င်တွင် အ၀ါရောင် မင်းသမီးလေးက သမင်လည်ပြန် လှည့်ကြည့်လေသည်။ ထိုခဏမှာပင် ကမ္ဘာမြေသည် အိုးထိန်းစက်ကဲ့သို့ ချာချာလည်ပြန်လေသည်။
‘မိုး’ သည် ချောပါသည်၊ လှပါသည်၊ မြင်သူတိုင်း ငေးရလောက်သော ရူပကာ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထို့ထက်ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ သူမ၏ မှတ်ပုံတင်ထဲတွင် သူမ၏အမည်ကို ‘မိုးသိမ့်လွင်’ ဟု ဖြည့်သွင်းရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Law Shay at 2:56 AM
Labels: 1501 AD - 2000 AD
အန် ဖတ်ရင်း အံ့သြသွားတယ်
January 17, 2009 at 3:52 PM
TAH မှ ပုံပြင်များသည် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်နှင့် ပုံပြင်များ (Sci-Fi and Fantasy) ကို မြန်မာ့ စာပေလောကတွင် မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကြံဆထားသော အခြားအချိန်ကာလတစ်ခု (An Alternate Time-line) ဖြစ်ပြီး ၀တ္ထုရေးသားမှုကို စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို ၀တ္ထုတို၊ ၀တ္ထုလတ်နှင့် ၀တ္ထုရှည်များ lawshay@lawshay.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်နှင့် ပုံပြင်များကို လောရှည်က ပိုမိုနှစ်သက်သော်လည်း ပေးပို့လာသော ဇာတ်လမ်းအားလုံးကို TAH ၏ သမိုင်းကြောင်း (Time-line) နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက မည်သည့် အမျိုးအစားကိုမဆို ဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပေးပို့လာသော ဇာတ်လမ်းအားလုံးကို TAH ၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ကိုက်ညီစေရန်၊ သတ်ပုံသတ်ညွှန်း မှန်ကန်စေရန်နှင့် ၀ါကျအထားအသို စနစ်ကျစေရန် မူရင်းရသကို မထိခိုက်စေပဲ အပေါ်ယံ ပြုပြင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြုပြင်မှုအားလုံးကို ရေးသားသူထံ ပေးပို့ အတည်ပြုပြီးမှ ဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ပေးပို့လာသော ၀တ္ထုဇာတ်လမ်းနှင့် ဇာတ်ကောင်များအားလုံးကို မူလ ရေးသားသူသာ ဆက်လက် ပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အခြားနေရာများတွင် ကြိုက်နှစ်သက်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၄င်းတို့ကို အခြေတည်၍ အခြားစာရေးသူတို့က ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းများ ဆင့်ပွား ရေးသားကောင်း ရေးသားမည် ဖြစ်သဖြင့် (TAH မှ ပုံပြင်များ၏ မူဝါဒအရ ထိုသို့ ဆင့်ပွား ရေးသားခြင်းကို ခွင့်ပြုရုံမျှမက အားပေးပါသည်။) သမိုင်းကြောင်း ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အတွက် (For canonical reasons) TAH မှ ပုံပြင်များတွင် ဖော်ပြထားပြီးသော ဇာတ်လမ်း (နှင့် ဇာတ်ကောင်များ) ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ရန် တောင်းဆိုခြင်းကိုမူ လုံးဝ ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။
Covid Diary Day-7 1-Apr
1501 AD - 2000 AD (1)
2501 AD - 3000 AD (1)
3001 AD - 3500 AD (1)
4501 AD - 5000 AD (1)
69999 BC - 69500 BC (1)
စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းများမျှသာ ဖြစ်ကြောင်း
TAH မှ ပုံပြင်များသည် စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းများသာ ဖြစ်သဖြင့် အမှန်တကယ် တည်ရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ နေရာဌာန၊ အကြောင်းခြင်းရာများနှင့် တူညီ၊ တိုက်ဆိုင်မှုများ ပါရှိပါက မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်မှုမျှသာ ဖြစ်ပြီး ရေးသားသူထံတွင် အခြား ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။
လောရှည် . ကွန်း(မ်) ဒိုမိန်းအောက်တွင် ဖော်ပြထားသော စာသား၊ ရုပ်ပုံ၊ အသံ၊ ရုပ်ရှင်၊ အပျော့ထည်များနှင့် အခြား အီလက်ထရွန်နစ်နည်းဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဥာဏပစ္စည်းများကို သုံးစွဲခြင်းကြောင့် သုံးစွဲသူထံတွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဥပဒေကြောင်းအရ ထိခိုက်နစ်နာမှု တစုံတရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သုံးစွဲသူ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပြီး လောရှည် . ကွန်း(မ်)နှင့် လောရှည်တို့တွင် ငွေကြေးအရသော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေကြောင်းအရသော်လည်းကောင်း၊ အခြားနည်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း တာဝန် မရှိစေရ။
လောရှည် . ကွန်း(မ်)၊ TAH မှ ပုံပြင်များနှင့် ဤ "လောရှည် . ကွန်း(မ်)" ဒိုမိန်း အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အခြားစာသား၊ ရုပ်ပုံ၊ အသံ၊ ရုပ်ရှင်၊ အပျော့ထည်များနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်နည်းဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဥာဏပစ္စည်းအားလုံးသည် အခြား ပိုင်ရှင် အမည်ဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက လောရှည်၏ မူပိုင်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ စင်ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ၄င်းတို့နှင့် ၄င်းတို့၏ မူပွားတို့ကို သိမ်းဆည်းထားသော အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းနှင့် အခြား အလားတူ ပစ္စည်းတို့ (ပုံနှိပ်စက္ကူ အပါအ၀င်) တည်ရှိရာ နိုင်ငံအသီးသီး၏ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများ၏ ကာကွယ်မှုအောက်တွင် တည်ရှိသဖြင့် လောရှည်၏ စာဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ကို ကြိုတင်မရယူပဲ စီးပွားရေးအရ ငွေကြေး အကျိုးအမြတ် တစုံတရာရရှိရန်အတွက် (ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်း အပါအ၀င်) သုံးစွဲခဲ့ပါက ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ စင်ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများ၏ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ရာဇ၀တ်မှုကြောင်း၊ တရားမမှုကြောင်းတို့ဖြင့် အရေးယူခံရမည် ဖြစ်သည်။
ဤ "လောရှည် . ကွန်း(မ်)" ဒိုမိန်း အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော စာသား၊ ရုပ်ပုံ၊ အသံ၊ ရုပ်ရှင်၊ အပျော့ထည်များနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်နည်းဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဥာဏပစ္စည်းအားလုံးသည် အခြား ပိုင်ရှင် အမည်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါက ၄င်းသက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင်၏မူပိုင်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ စင်ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပိုင်ရှင်တို့ နေထိုင်တည်ရှိရာ နိုင်ငံနှင့် ၄င်းတို့နှင့် ၄င်းတို့၏ မူပွားတို့ကို သိမ်းဆည်းထားသော အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းနှင့် အခြား အလားတူ ပစ္စည်းတို့ (ပုံနှိပ်စက္ကူ အပါအ၀င်) တည်ရှိရာ နိုင်ငံအသီးသီး၏ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများ၏ ကာကွယ်မှုအောက်တွင် တည်ရှိသဖြင့် ၄င်းတို့၏ခွင့်ပြုချက်ကို ကြိုတင်မရယူပဲ စီးပွားရေးအရ ငွေကြေး အကျိုးအမြတ် တစုံတရာရရှိရန်အတွက် (ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်း အပါအ၀င်) သုံးစွဲခဲ့ခြင်းကြောင့် အရှုပ်အထွေး တစုံတရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ထိုသုံးစွဲသူ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပြီး လောရှည် . ကွန်း(မ်) နှင့် လောရှည်တို့တွင် ငွေကြေးအရသော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေကြောင်းအရသော်လည်းကောင်း၊ အခြားနည်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း တာဝန်မရှိစေရ။